Isizukulwana sokuqala kwii-biofuels | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Isizukulwana sokuqala se-biofuels
Los Iibhayoloji Zingachazwa zibe sisizukulwana sokuqala, esesibini nesesithathu ngokohlobo lwempahla ekrwada esetyenziselwa ukwenza ipetroli.
Los Isizukulwana sokuqala se-biofuels Babengabokuqala ukwenziwa kwaye zezona zivusa inkxalabo enkulu okoko izityalo zokutya zisetyenziswa njengempahla eluhlaza. Phakathi kwazo kukho umbona, iswekile, iimbotyi zesoya, phakathi kwezinye ezenziwayo bioethanol y biodiesel.
I-US kunye neBrazil ngoovulindlela kolu hlobo lwee-biofuels kwaye ngabona bavelisi bakhulu ukusukela oko baphuhlise olu hlobo lwe-oyile engenye ngaphambili kunakwamanye amazwe.
Olu hlobo lwe-biofuel luyasebenza kwixesha elifutshane okoko ukusetyenziswa komhlaba wezolimo kunqunyelwe kwizityalo ezisetyenziselwa kamva ukwenza ii-biofuels ngaphandle kokuzivelisa. ukunqabiseka kokutya okanye iingxaki zamaxabiso okutya kwelona candelo lihlwempuzekileyo labemi. Kanye neengxaki zokusingqongileyo ezinje ngokutshatyalaliswa komhlaba, ukugawulwa kwamahlathi, phakathi kwabanye.
Kulindeleke ukuba kwiminyaka embalwa kuphela inani elincinci lemveliso epheleleyo ye-biofuels eya kuba sisizukulwana sokuqala kwaye isizukulwana sesibini nesesithathu sizakusetyenziswa kakhulu ngenxa yozinzo olukhulu ekuhambeni kwexesha kuba bengasebenzisi zityalo zokutya.
Umahluko obalulekileyo ukugcina engqondweni ukuba kutshintsha kwe mozulu Ichaphazela ukuveliswa kwezityalo ngoko ayicetyiswa into yokuba kulinywe ngamandla ukuze kuveliswe izibaso.
I-UN ikhuthaza ukusetyenziswa kunye nokuveliswa kwee-biofuels kodwa kwiingxelo ezininzi zibonisa inkxalabo yokuphepha ingxaki yokutya ii-biofuels ezivela kwi-biofuels ethi icebise amazwe kunye neenkampani ukuba ziphuhlise iintlobo zezibaso kwixesha eliphakathi nelide.
Inkqubela phambili ebalulekileyo kwezobuchwephesha iyafezekiswa kwisizukulwana sesibini nesesithathu kuba zezona zifanelekileyo ukubuyisela iifosili ezilawula intengiso namhlanje.
Kubalulekile ukuzisebenzisa izibonelelo ze isishwankathelo ngaphandle kokwenza iingxaki ezintsha kwezentlalo nakokusingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biodiesel » Isizukulwana sokuqala se-biofuels